သားသမီးလေးတွေရဲ့ Software နဲ့ Tools သုံးတာကို မိဘတွေ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ညွှန်ပြ ပေးနိုင်ဖို့ | Radio Veritas Asia
သားသမီးလေးတွေရဲ့ Software နဲ့ Tools သုံးတာကို မိဘတွေ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ညွှန်ပြ ပေးနိုင်ဖို့
ဒီနေ့မှာ သားသမီးလေးတွေရဲ့ software နဲ့ tools သုံးတာကို မိဘတွေ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ညွှန်ပြ ပေးနိုင်ဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်လေးတွေ မိမိအသက်အရွယ်နဲ့ မသင့်လျော်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ online ပေါ်မှာ ကြည့်နေမယ်။ ချဉ်းကပ်နေမယ်ဆိုရင် မိဘတွေ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ?
ဖုန်းကို မကိုင်ရဘူးဆိုပြီး ဖုန်းပြန်သိမ်းလိုက်မှာလား? ဆူပူကြိမ်းမောင်းပြီးတော့ကော ပြီးသွားမှာလား? ကလေးတွေမှာ online သုံးဖို့ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် မရှိတော့ဘူးလား?
Screen Time Limit ကို လျှော့ချလို့ကော ရမလား? ဒီနေ့ခေတ်မှာ မိဘတွေ အဲဒီလိုလုပ် လို့တော့ မရတော့ပါဘူး။ အချိန်ပြည့်လိုက်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းရှိမှသာ မိမိသားသမီး ဘယ်ရောက်နေတယ်။ ဘာလုပ်နေတယ်။ အဝေးကနေ checking လုပ်လို့ ရမှာပါ။ အများနည်းတူ ပေးကိုင်ရမှာပါပဲ။
ဒီတော့ မိမိသားသမီးကို online ပေါ်မှာ ရောက်နေရင် မိဘအနားမှာ မရှိတဲ့အချိန်တွေမှာ ဘယ်လိုပြုမူရမယ်၊ ဘယ်လိုတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ အရင်ဦးဆုံး သင်ပေးရပါ့မယ်။
မိဘကနေပြီး လုံ့လဝီရိယရှိစွာနဲ့ internet မှာ ရှိတဲ့ ဟာသတွေ၊ ဗဟုသုတတွေ၊ ထုတ်လုပ်မှု များစွာတွေကို ထောက်ပံ့ပေးရင်းနဲ့ ထိန်းချုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။
တချို့မိသားစုကျတော့လည်း သင့်တော်မယ့် ခေါင်းစဉ်တွေ မာတိကာတွေကို လွတ်လွတ် လပ်လပ် သုံးခွင့်ပြုတယ်။
တချို့ကျပြန်တော့ မိဘဆိုတဲ့ အာဏာကို သုံးပြီး Ph မသုံးရဆိုပြီး နှိပ်ကွပ်တာတွေ ရှိပါတယ်။
တချို့မိဘတွေကျ ပြန်တော့လည်း အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့ သားသမီးသုံးတဲ့ devices တွေကို spot check လုပ်ကြတယ်။
မိဘတွေရဲ့ အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ်မှုကတော့ ဘာတွေဖြစ်မလဲ? ငယ်သေးတဲ့ ကလေးတယောက် ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်ရင် default လုပ်ထားပြီး နောက်မှတဖန် safe search ကို ပြန်ပြောင်းပြီးထားပါ။ ငယ်ရွယ်တဲ့ သားသမီးစပြီး online ကို သုံးမယ်ဆိုရင် ဒီနည်းကတော့ ကောင်းတဲ့မိဘ မနှစ်သက်ဖွယ်ရာတွေကို ခလုတ်တိုက်ပြီး ရောက်သွားတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တားဆီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သုံးတဲ့ website ကို ဝင်ကြည့်ပြီး သင့်လျော်မဲ့ content ကို ဖော်ထုတ်ပေးပြီး ရင့်ကျက်တဲ့ ကစားနည်းလေးတွေ ညစ်ညမ်းစာပေတွေ ရှောင်ရှားပေးလို့ရပါတယ်။
မိမိသားသမီးလေးတွေ online ပေါ်က သိလိုတဲ့ ဆန္ဒတွေကို စူးစမ်းရှာဖွေနိုင်ဖို့ safe space လေးပေးထားရမယ်။ ပြီးတော့မှ တဆင့်ချင်း guide လုပ်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ control နဲ့ network တွေ apps တွေ sites တွေမှာ ဝင်ရောက်ပေးကြည့် အသုံးပြုပေးရင်း online experience ရလာမှာ ဖြစ်တယ်။ မိဘတွေက သားသမီးကို ရိုးသားပြီး ဖြောင့်မတ်တဲ့လမ်းကို ရောက်ဖို့ ကူညီပေး နိုင်ပါတယ်။
ကလေးတယောက်ဟာ online မှာ သူဘာတွေတွေ့တယ်။ မြင်တယ်ဆိုတာ မိဘကို အရာအားလုံး ပြန်ပြောပြနိုင်ဖို့ ခွန်အားပေးရမယ်။ ပြောသမျှကို နားထောင်ပေးရမယ်။
မိဘနဲ့သားသမီး online issue တွေမှာ သဘောတူညီမှုတွေယူပြီး အကျိုးရှိမဲ့ issues တွေကို share လုပ်ကြမယ်။ မိဘနဲ့သားသမီးအတူ ပူးပေါင်းပြီး digital lives ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးရမယ်။ ဒါဆိုရင် online ကို လက်တွေ့ရင်ဆိုင် တတ်လာမယ်။ မိမိကို တိုက်ခိုက် လာရင်လည်း ဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဒီonline သုံးတာကို မဆူပူပဲ သားသမီးနဲ့ မိဘလက်တွဲပြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲ တဖြည်းဖြည်း တဆင့်ချင်း ညွှန်ပြပေးရင်း ထိန်းချုပ်လို့ ရသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတာ တင်ပြရင်းနိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
သာယာအေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်လေး တစ်အိမ်ကို ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူ ကျွန်မတို့တစ်တွေ တည်ဆောက်ကြရအောင်
'' အတုယူထိုက်တဲ့အလီဘာဘာ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဂျက်မား ''